Sababta Qoys ay muddo lix sanno ah ugu negaadeen Isbitaal! | Radio Himilo
Home / Habka-Nolosha / Sababta Qoys ay muddo lix sanno ah ugu negaadeen Isbitaal!
Posted by: Sadia Nour January 12, 2021
Himilo – Nin Shiinees iyo waalidkiisa ayaa go’aansaday in ka bixiyaan isbitaalka Beijing oo uu muddo lix sanno ah si joogto ah ugu noolaa kaddib markii muran xagga deynta ah uu dhex maray iyaga iyo maamulka.
Waxaana lagu galbiyay ambalaasta isbitaalka.
Previous: Real Madrid oo 200 milyan ku dooneysa Kylian Mbappe
Next: Bisad iyo qoyskii lahaa oo dib u midoobay saddex sanno kaddib!